I-china excavator iqinisa abakhiqizi bamabhakede omhlaba nabaphakeli | UMINYAN
Inzuzo Yemikhiqizo Yethu 1) Izinga Likazwelonke 2) Izinto ezisezingeni eliphakeme 3) Ukuphakama okuphezulu, 4) Ukuqina okukhulu, 5) Impilo ende namandla okuthwala okuqinile, 6) Kudluliswe ukuqapha komnyango onegunya kuzwelonke. I-8) Ithole ukwethenjwa kwamakhasimende amadala.
I-Excavator iqinisa ibhakede lomhlabathi linamapuleti asezansi nawezinhlangothi agudlile, ithuthukisa ukumelana nokugqoka futhi inesikhathi sokusebenza esinde ukwedlula ibhakede lokuhambisa umhlaba. Lesi isitayela sebhakede le-excavator esithandwa kakhulu. Ukukhetha okuhle kwe- "center line", noma indawo yokuqala, lapho izimo zohlelo zingaziwa kahle.
Ngezimo ezahlukahlukene zomthelela nokuhuzuka kufaka phakathi ukungcola okuxubekile, ubumba nedwala. Isibonelo: Izimo zokumba lapho ukungena kwe-Penetration Plus kuphakathi kwamahora angama-400 kuya kwangu-800.
I-excavator iqinisa ukusebenza kwamabhakede omhlaba kunconyelwa ukuselela umsebenzi wezinsiza, kanye nosonkontileka jikelele osebenza ezimeni ezahlukahlukene. Amapuleti agqokile ezansi nohlangothi kunamabhakede ajwayelekile okusebenza isikhathi eside. Ama-adaptha namathiphu wamabhakede akalwe ngobungako bokusebenza okuthuthukisiwe nokuqina. Amabha ohlangothini abunjwe ngaphambili kusika ohlangothini abazikhethela, futhi ezimweni eziningi, izivikeli zebha eseceleni.
Amandla WokunikezelaAmandla Wokunikezela:300 Piece / Pieces Inyanga ngayinye Excavator ibhakede
Ukupakisha nokulethwaOkufakiwe YekuchumanaPallet ngokhuniIchwebaQingdao / ShanghaiIsikhathi esiholayo :
I-Xuzhou Minyan Import & Export Co., Ltd ingumkhiqizi oholayo wokunamathiselwe kwe-excavator e-China. Ikhwalithi yayo yonke imikhiqizo ilawulwa ngokuqinile kusukela ekusetshenzisweni kuya ekulethweni. Ngokwenziwa okuqhubekayo nokuthuthuka, inkampani ithole Izitifiketi ze-ISO 9001, CE futhi amalungelo obunikazi obuchwepheshe ngokulandelana. Imikhiqizo yethu ithengiswe kumakhasimende asekhaya naphesheya kwezilwandle futhi ubudlelwano besikhathi eside buthuthukisiwe Injongo yethu yile: Ikhwalithi kuqala, i-Service ephambili, ne-Innovation ebaluleke kakhulu Ukuzibophezela ngokungayekethisi kuseqophelweni eliphezulu nensizakalo ecatshangelwayo kusizuzela idumela elihle nabalingani abengeziwe abazayo. Futhi sizoqhubeka nokwenza ngcono imikhiqizo ukuze sikhonze kangcono imakethe yomhlaba. Sibheke phambili ekusebenzeni nawe!
Leli bhakede lenzelwe iphini elinelungelo lobunikazi elihlinzekiwe ukuze linikeze ukumba okuphezuluukusebenza ngenkathi ugcina ukuguquguquka nokusebenziseka kalula kwesixhumi. Ithiphu engaba nguincishisiwe futhi ivumela ukufika ku-10% kokuthuthuka kwamandla okuphuma uma kuqhathaniswa ne- aiphini ejwayelekile ebhakedeni nenhlanganisela ye-coupler.I-Pin Grabber Performance Buckets iyatholakala ngabembi abangama-315-349, ngokujwayelekileInhloso nokuqina kweDuty ukuqina.
Ukusebenza kwe-Pin Grabber
Amandla Amabhakede asetshenziselwa izinhlelo zokusebenza ezinolaka lapho kuphuma khona amandla nezikhathi zomjikelezozibucayi - futhi zisetshenziselwe izinto ezifana nodaka oluhlanganisiwe oluhlanganisiwe nedwala. (HhayiKunconyelwe ubumba.) Amandla okuphumula akhulisiwe ngenxa yokuncipha kwethiphu engaba futhiukwanda kwephini. Izikhathi zomjikelezo womshini ezintweni eziningi zithuthukiswa ngaphezu kwezingaibhakede kuhlelo olufanayo.Amabhakede Amandla Esisindo Esisindayo ayatholakala ngezimbiwa ezingama-320–336
Amandla Amabhakede Amakhulu aklanyelwe futhi akhelwe ukusetshenziswa ekulayisheni okuphezulu kweloli yokukhiqizaizinhlelo zokusebenza. Ngokusebenzisa okufanele nokusetha, la mabhakede azohambisa izinto eziningingamaphasi amancane - ukukhulisa ukukhiqizwa.Amabhakede Amandla Aphakeme atholakala kumbiweki angama-336-390, ngokuqina kweGeneral Duty.
Langaphambilini i-excavator ripper
Olandelayo: Excavator ibhakede izinyo